Ngizuze okuphindwe kabili, kepha "omunye wami" uTroll | Kusuka kuLinux
Abanye abasebenzisi bangahle bazi, abanye bangibuze, futhi mathupha ngithole ukuthi bekukhona omunye "Elav" kwinetha sibonga iTwitter. Iqiniso ukuthi, kukhona umuntu ozenza mina, esebenzisa igama lami mbumbulu, ngisho ne-avatar yami, ukuhlasela I-Peevish en I-linux kakhulu.
Konke kuqale ngo- la mazwana esuswe ngesicelo sami nokuthi mbumbulu kuphi "Elav" ukhubeke ngqo I-Peevish. Ngokwami ​​bengingafuni ukunaka kakhulu lokhu, kepha vele isihloko sesiqala ukucasula futhi sinemiphumela eminingi.
Futhi ngasho nge- Twitter, Angikhathali kangako ngodumo lwami, ngoba ngubani ongaziyo uyazi ukuthi bengingeke ngikwazi ukuhlasela umuntu ngendlela engafanelekile futhi, uma kungukuthi lowo muntu akangenzanga, noma washo noma yini. Futhi angikhathazekile ngokuthi udumo lwe KusukaLinux, ngeqiniso elilula lokuthi uma silapha namuhla, ngaphezulu kwami ​​noma kwami KZKG ^ Gaara, Kwakungenxa yakho.
Ukuhlonishwa esikutholile kube ukubonga Umphakathi yini ezungezile KusukaLinux, nokuthi yini abambalwa abangase bayicabange ngami, noma omunye umsebenzisi lapha, ngeke kuyithinte nakancane ibhulogi. Ngeshwa, kukhona ama-troll kuyo yonke indawo, futhi umehluko wemicabango uyefana.
Kuthiwani uma ngingaboni okulungile, ukusebenzisa ubunikazi bomunye umuntu, ngokungabi namabhola okuvela futhi ubhekane nemiphumela yezenzo zethu.
Ngiyaqiniseka ukuthi lowo muntu ongilingisile ubelapha KusukaLinux futhi ushiye imibono yakhe. Ngifisa futhi ubehlakaniphile futhi afake zonke izinto eziyiziphukuphuku azibhalile, uzisebenzisile Tor noma enye indlela yokugcina ukungaziwa kwakho nokugcina ikheli lakho le-IP lifihliwe. Ngithemba kuphela kanjalo.
Ngalesi sikhala ngifuna ukucacisa ngokusemthethweni, ukuthi angiyena umuntu othi yimi. Lokho anginakho okuphikisana nakho I-Peevish noma yiliphi elinye ilungu le- I-linux kakhulu, nokuncane kakhulu, kunomgomo we KusukaLinux "Ukwehlisa isihlalo sobukhosi" leso sikhala ebesikhuthaza ukusetshenziswa kweFree Software isikhathi eside.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Ngizuze okuphindwe kabili, kepha "omunye umuntu" wami yiTroll
Hhayi-ke, angikaze ngicabange ukuthi izinga lokunyathelwa phansi lingafinyelela kulezi zindawo eziphakeme, lifake ubunikazi ngisho nangesithombe, kuyamangaza lokho okufinyelelwa yingqondo engenzi lutho ngaphandle kwezinzwa.
Thokozisa u-Elav futhi ungashisi ikhanda lakho phezu kweziwula.
Ngikhumbula lapho ngidlula esigabeni sami se-troll, cishe eminyakeni eyi-10. Ngaleso sikhathi ngangivikela iWindows Vista ngazo zonke izindlela, kepha ngangingenakwenza lutho. Kodwa uyakhula futhi awunaso ngisho nesikhathi sokuya endlini yangasese. Lokho kwenzeka ngokuhamba kwesikhathi.
Damn, okokuqala kusikwa i-athikili, bese imibono ayisebenzi ... nayi i-xDD yobuthakathi
Ubuthakathi, ngenza ubuthakathi (8)
Mhlawumbe kukhona okungena ngaphakathi: NOMA UMBILI WOKUDLULA NGOKUQEDA
¬¬ Awufuni ukwazi ukuthi senzani ezweni lami kulabo abazama ukunikeza amaCoups d'état ... vele ukutshele ukuthi ungacabanga ngokukhanya kuwe, isiyingi esikhulu sokukhanya esikuthumba bese unyamalala , unomphela hahaha
Ingabe izwe lakho liseduze nePluto? i-xD
uphuma kuphi? Angikaze ngiyazi i-xD
Isiqhingi Esise-Antilles .. esiseGulf of Mexico .. Ngeke ngisakutshela haha
? Cuba? IHaiti? i-xD
Ukaputeni osobala ekusizeni: ungowaseCuba.
Rude kaputeni usa
Ukucaphuna uMichael Moore. Lesi yisibonelo:
Ngo-1962, ngokusho kweSan Francisco Chronicle, owadingiswa eCuba uJosé Basulto, emkhankasweni owawuxhaswe yi-CIA, wadubula inganono engu-20mm esikebheni esinejubane eHhotela, ngaseHavana Bay, enethemba lokubulala uFidel Castro. I-projectile ilahlekelwe yilokho obekuhlosiwe, kwathi uBasulto, ebona ukuthi umkhumbi wakhe ugcwele uphethiloli ochithekile, wazungeza waya eFlorida. “Elinye lamathangi ethu kaphethiloli, elenziwe ngopulasitiki, laqala ukuvuza,” kuchaza uBasulto kamuva. Uphethiloli uchitheke emphemeni. Besingazi ukuthi senzeni ".
Eminyakeni eyalandela, uBasulto wasungula i- "Hermanos Al Rescate," iqembu labadingiswa eminyakeni embalwa eyedlule ababendiza eCuba, bezulazula emadolobheni, bewisa amapheshana, futhi bezama ukwesabisa uhulumeni waseCuba. NgoFebhuwari 1996, uCastro wabonakala enesithukuthezi ngalokhu kuhlukunyezwa, kwathi ngemuva kwesigameko sama-25 sonyaka esenziwa "Abafowethu" bephula isikhala sasemoyeni saseCuba, wayalela ukuthi kudutshulwe izindiza zakhe ezimbili.
Yize "iBrothers to the Rescue" yephule umthetho waseMelika ngokundizela esikhumulweni sezindiza saseCuba, abaphathi bakaClinton baphinde baya esibayeni sokudingiswa futhi ngaso leso sikhathi bakhipha isimemezelo sokuqinisa ukuvinjelwa kweCuba. Lokhu kuvinjelwa kwaletha ulaka lomhlaba wonke kithi. UMkhandlu Kazwelonke Wenhlangano Yezizwe uvotele u-117-3 esivuna ukugxeka iMelika ngodlame lwayo lwezomnotho olwalubhekiswe eCuba, njengoba bekulokhu kuvota kuwo wonke lolu daba selokhu kwavalwa lo mkhawulo.
Esontweni ngemuva kokudutshulwa kwezindiza, abadingisiwe bazama ukuphuthumisa i-United States, benethemba lokubandakanya amasosha ngandlela thile ngokulwa noCastro. Bamemezele ukuthi ngoMgqibelo olandelayo bazothatha i-flotilla yezikebhe ezisuka eFlorida ziye olwandle lwaseCuba ukuphikisana nokwehliswa kwezindiza ezimbili. UClinton unqume ukwenza umbukiso omkhulu wamandla wokulwa neCuba kusukela ngeMissile Crisis, futhi wathumela
a .. iqembu labasizi be-F-15,
b .. abayishumi nanye abagawuli besiGada
c .. ama-cruiseer ama-missile amabili,
d .. i-Navy frigate,
e .. izindiza ezimbili ze-C 130,
f .. umhlambi wama-Choppers,
g .. Ama-AWAC,
h .. nama-midshipmen angama-600 ukuxhasa i-flotilla.
Ukuphela kwento ayikhohliwe ukuyithumela kwakuyikhambi lokulwa nokugula kwasolwandle, okwathi ekugcineni kwaba ukuphela kwento abaseMiami Cubans ababengayidinga ngempela. Ebangeni elingamakhilomitha angama-40 ukusuka eKey West, amaCuba asezikebheni aqala ukuba nesiyezi, ahlanza, futhi ancenga abashayeli bawo bezindiza ukuba baphendukise izikebhe ezinamandla baphindele eMiami. Njengoba umhlaba wonke ubukele, abaseCuba babaleka futhi nemisila yabo phakathi kwemilenze yabo. Lapho befika ethekwini, banikeza isithangami nabezindaba ukuthi bachaze ngokuhoxa kwabo.
Isikhulumi besisadidekile, ububona nezintatheli zihlukana naye, zisaba ukuthi zingambozwa yi "Linda Blair Special" noma nini ... "Kuqubuke isiphepho esibi olwandle," kusho umholi we Ukuphunyuka kweCuba ngenkathi kuphenduka ngokushesha. "Amagagasi ayengaphezu kwamamitha ayishumi ukuphakama, futhi kwakudingeka sibuyele emuva noma silahlekelwe yizikebhe zethu!" Ngenkathi esakhuluma kanjalo, ubuhlakani obuthile ku-CNN baqala ukusakaza izithombe zasemoyeni ze-flotilla ebheke eCuba.
Ilanga lalikhanya, ulwandle lwaluzolile njengepuleti, futhi umoya wawuphephetha kahle, uma kunjalo. Izintatheli ezisolwandle oluphakeme zithe ngemuva kokuhamba kwamakhamera e-CNN, amanzi aba "nokubi impela." Yebo, impela, kungenxa yokuhleka kukaFidel, owayeshaya ngokuhleka ...
«¬¬ Awufuni ukwazi ukuthi senzani ezweni lami kulabo abazama ukunikeza amaCoups d'État ... vele ukutshele ukuthi ungacabanga ngokukhanya kuwe, isiyingi esikhulu sokukhanya esikuthumba wena nawe anyamalale, unomphela hahaha »
Hahaha, yini ukufaka! i-xD
hahaha, phumula elav ... Ngiyazi ukuthi kuyakhathaza futhi kunikeza intukuthelo kepha ungabanaki kangako, njengoba ushilo, labo abakwaziyo (nalabo abakwazi kancane njengami) bayazi ukuthi ngeke hlasela umuntu ngokungafanele wehlise umoya.
Kuhle ukwazi .. kepha kuhlale kukhona ongazi lutho okholelwa 🙁
Umuntu wakithi omuhle ubekade ecula ethi "Unginike ushevu, ngathatha nobuthi, kepha njengoba ngiwubuthi, uyabona, angizifakanga mina" ... cula futhi ungakhathazeki, lolo hlobo lwetheniphu lukuyo yonke indawo .
Awu, umonakalo usuwenzile. Kuyadabukisa ukuthi kunabantu abanjalo, okubi nakakhulu, ngalawo mazwana we-clone Elav kwase sekwakhiwe isithombe esibi. Ngenhlanhla lokhu okuthunyelwe kucacise ukungabaza, sengivele ngathi "akuyena."
Noma kufanele ngivume ukuthi ngathola ukuhleka ngifunda ama-Elavs kumazwana abekiwe. Kuphela i-Clone Yoyo ne-Pablo kusuka ku-Let Us Use Linux ezingekho. Ahhh, neKZKG ^ Gaara.
xDD Umhlaba ubuzophela ..
Hhayi-ke, angicabangi ukuthi sekwenziwe umonakalo omkhulu kangaka kusukela ku-muylinux (ikhasi engilivakashela kakhulu ngihlangene naleli) kunama-troll amaningi cishe kuzo zonke izihloko, ngakho-ke ungakhathazeki, angicabangi ukuthi yilokho kubi
Kungenzeka, kepha abanye bakukholwa .. Ngacishe ngakholwa uma ngibona isithombe sami .. WTF?
kuyiqiniso ngicabanga ukuhlukumezeka okungu-0.0, izinto ezenzekayo ... manje sidinga nje ukuzingela abathakathi futhi sibheke i-troll hehehe
Ngifunde inothi lakhe lokuvalelisa elivela kupicajoso namhlanje ekuseni (evela eMexico) futhi ngafunda ukuphawula kwakho, futhi ngokushesha ngathola ukuthi bekungeke kube nguwe, ngenxa yezizathu ezimbili ezilula:
-Indlela yokubhala ukuphawula.
Yize i-avatar negama kungaba ngeyakho, indlela yokubhala ingahle ingabi, lowo umehluko omkhulu.
Ngokwami, ngicabanga ukuthi unokubhala okuhle, futhi akuvamile ukuthi usebenzise inhlamba ezincwadini zakho (kuphela uma kukhona okukukhathaza kakhulu).
Akumangalisi cishe inyanga noma ezimbili ezedlule, angikukhumbuli kahle, ngifunde ukuphawula okuvela kuwe uhlasela iPicajoso, kungenze "ngixakile" ngivela kuwe; kodwa angibange ngisakunaka, manje nginesiqiniseko sokuthi bekungewena.
Kepha ungakhathazeki, thina esifunda i- "FromLinux" siyazi ukuthi awubhali noma ubhale ngamaphutha esipelingi, njengamanye ama-troll agcwele ku- "Very Linux" nokuthi kwesinye isikhathi ahamba lapha. Umehluko ukuthi lapha, akekho odlala umdlalo wabo osile.
Ngiyabonga .. Ngiyajabula ukukwazi ukuthi unalowo mbono ngami .. [ngihlebela] noma ungafuni ukungibona lapho ngicasukile, bakhuthazwa yimina ukuthi benze i-Hulk… xDDD
Hahaha, ngiyethemba angikuboni uphenduke iHulk.
Ngokwami, ngicabanga ukuthi wonke la "ma-troll" agcwele emakhasini e-web, ikakhulukazi kwi-GNU / Linux, ngicabanga ukuthi ayintsha ethile engenakwenza lutho, ukuhlupha abanye, angenzi lutho, entula isiko lenhlonipho nemibono yabanye . Bakholelwa ukuthi abakucabangayo, abakusebenzisayo noma abakucabangayo "kuyinetha lomhlaba" njengoba sisho eMexico (angikusho lokhu ngoba ngibheka intsha ngaleyo ndlela, kuphela ukuthi bakhombisa ukungavuthwa kwabo ezingxoxweni zabo).
Ziningi izikhala ezinjengezethu, kwanele ukuzungeza amanye amakhasi esiNgisini futhi ukuphawula okuningi kunenhlonipho, kokubili esihlokweni esishicilelwe, kanye nakulabo abaphawulayo, ngokwesibonelo; Ku- "OMG Ubuntu" akuvamile ukuthi ufunde lolu hlobo lwecala nokungavunyelwa okwenziwe ngumhleli, noma omunye umuntu oprinta umbono wakhe, lokho kuchaza kancane izinga lethu lesiko.
Kungumbono wami nje othobekile, wokuthi ngingahle ngibe nephutha impela.
futhi ngeshwa awuyena.
Kuyiqiniso, leyo troli encane ibivele inesikhathi eMuylinux. Vele bengilokhu ngazi ukuthi ngiyi-troll yalabo abagcwele kulelo khasi, ikhasi engilithanda kakhulu mathupha. I-troll yakho iwuphawu lokuthi udume ngokwengeziwe kulo mhlaba we-GNU / Linux.
Lokhu kungenze ngakhumbula isikhathi sami kuClubSO; ikhasi engilifakile elifana nalapha njengomsebenzisi olula base bengimema ukuba ngibe umongameli bese ngiba umphathi. Kepha sengivele ngikhona, ngaqala ukubona ezinye "izinto ezingajwayelekile" futhi lapho ngizibalula kumphathi wewebhusayithi uCrystalEye, waqala ukungivimba futhi angazi ukuthi yimaphi amaqhinga awasebenzisayo, waqonda amaphasiwedi ami kuma-imeyili ami waqala ukuthumela ama-imeyili avela kuma-akhawunti ami kubasebenzisi abahlukahlukene, abangani nomndeni ebathuka futhi ebaphatha kabi kakhulu (ukusho ngendlela ehloniphekile) bese bevala ama-akhawunti ami futhi angazi ukuthi yini enye eyenzekile, ngoba kusukela ngoJanuwari 25 , 2012 angikabuyeli lapho, bekufanele ngenze ama-akhawunti amasha eposi futhi kusuka kubo ngixolise kulabo abathola ama-imeyili avela kuma-akhawunti ami engingawathumelanga. Lokho kuyenzeka; njengoba umkhulu wayehlala esho; "Ngokuthembela kakhulu futhi uthembekile m'ijo." Amaphoyisa esayensi ase-Argentina aphethe isikhalazo sami futhi athola ukuthi konke sekwenziwe eMendoza, idolobha lapho lo muntu ahlala khona futhi bangicela ukuthi ngifake isikhalazo sobugebengu ukuze ngimbophe, kepha anginalo lolo thando lokuziphindiselela nokuningi nge umuntu osemusha nokuthi kunzima ukuthi aphile ngomsebenzi onesizotha bese eya ku-facu, ngakho-ke kungcono ngivumele i-Universe ukuthi imkhokhise. Sengivele ngisinqobile leso sigaba sokuziphindiselela, impilo ingcono ukuhlala ngenjabulo futhi (esinye isisho sikamkhulu wami): «kuphela esihlahleni esithela izithelo baphonsa amatshe».
Ngiwafundile amazwana abhalwe "clonic" futhi kusobala, bekusobala ukuthi akuwena "Usale kahle manito ..." kusho ukuphawula u-83 eyodwa lapho ezweni ohlala kulo abakhulumi kanjalo. Ngingacela i-IP, impela ngumuntu ovela eMexico noma eChicano
I-manito yokuvalelisa ngiyibeka, futhi uma ubheka isidlaliso angiyena omunye wama-clones ama-Elavs. Eqinisweni, ngivele ngabuza u-Elav kokunye okuthunyelwe ukuthi ngabe nguyena yini, ngoba nami bengingabaza. Uma ufuna ukubona ama-clones ama-Elavs asemibhalweni yakudala, iya ezansi kwekhasi lapho lapho kuthiwe "imibono emidala" Manje zivela ekuphawuleni # 44, kepha zisuse elilodwa lamagama amabi. I-elav engiphendula emazwini ami kusobala ukuthi akuyona eyeqiniso.
Hehe, kanti futhi, angiyena owaseMexico. Ngenzela ukungabaza, ungalandeli i-ip yami.
U-Elav man, ekugcineni, ayingozi ekuhwebeni, futhi sonke esikufundayo sazi kahle amafomu owasebenzisayo ukubhala, ngakho-ke kulula ukukhomba umkhohlisi. Manje njengoba ujwayele ukusho; »Ekugcineni okubalulekile ukuthi bayakhuluma, kuhle noma kubi kepha ukuthi bayakhuluma» xD bheka uhlangothi oluhle, <° Linux nabadali bayo sebaziwa kakhulu manje njengoba usunetroll yakho eMuyUbuntu xD
Akungimangazi ukuthi uzuza ngokwengeziwe «umngane kaNkulunkulu» futhi ngokuya ngokuya ubona inkazimulo ozigcwalisa ngayo, ikakhulukazi ngamanothi akho akamuva naphuzi.
Okungenani ngasohlangothini lwami, uzoba ngomunye wabokugcina kulabo abebengazama ukungidlulisa, ngaphambi kokuthi ngicabange nokuzidubula ekhanda.
Kepha hheyi, wonke umuntu onesitayela sakhe, okungenani lokho akusikho okwami, ngithanda ukusho izinto engizicabanga ngqo ebusweni babo. 😉
Kokunye, isimo esibuhlungu sokuthi bazenza munye njengokusho izinto ezingenangqondo.
Sawubona elav, sengivele ngiwuphendulile umlayezo ongithumelele wona ntambama, lapho ngizochaza konke. Kunoma ikuphi, sizozama ukuvimbela lezi zinto ukuthi zingenzeki ngokuzayo 😉
@Rayonant, ngicabanga ukuthi i-elav ibingahlekisi kakhulu nge-troll, kepha yilokho okwenzekayo lapho abantu belahlekelwa yinhlonipho. Ngendlela, siyi-MuyLinux, hhayi i-MuyUbuntu.
Ngithanda ukuthi ume nge-Metalbyte, ngiyathemba ukuthi awuphuli ngaphambi kwama-troll ashibhile.
Okokuqala ngiyaxolisa ukuthi awukuthandi ukuphawula, bekungaphezulu kwehlaya (ihlaya) ukuzama ukususa ithinti elimangazayo, ngiyayazi iBlog futhi ngiyazi ukuthi kukhona okuqukethwe okuhle. Ngokuphathelene ne-elav, kuhamba ngendlela efanayo.
Uphendulile ku-imeyili efanayo? Ake ngibone kodwa angibonanga lutho .. ngiyabonga ngokuthatha isikhathi sakho ukukwenza. 😉
Ngiphendulile kukheli olibonisile, ngicabanga ikheli lakho le-Gmail. Kunoma yini onami lapho 😉
@Rayonant, ngiyazi ukuthi kuyadlalwa, inkinga ukuthi ngemuva kokuyiphinda kaningi iyeka ukubonga, awucabangi? Ikakhulukazi kulokhu kungena 😉
Mmm uphelele. Ngiyabonga.
Kuyadabukisa ukuthi lolu hlobo lwesimo luyenzeka, nokuthi inhloso yamaBlogs amabili amakhulu ihlanekezelwe, ehlose ukukhuthaza umhlaba weLinux. Futhi-ke Elav, asethembe ukuthi umkhohlisi akazukuvela futhi.
Ngangizisola kakhulu ukubona ukuthi izinkundla zazigcwaliswa kanjani ngogaxekile, futhi manje lokhu. Kuyadabukisa ngempela. Kepha masingazivumeli ukuthi sehlulwe ngabantu okusobala ukuthi abanayo imfundo.
Okungimangazayo ukuhoxiswa kwepicajoso
Iqiniso ukuthi alingimangazi. Noma ngabe yini imbangela (yena, ngamafuphi, usola imithwalo yemfanelo eyeqile nokunye kokunye), iqiniso lokuthi muva nje izindatshana zakhe bezingamakhophi nje ezinye izindaba zeMuyComputer, okuholele ekutheni abafundi nezinduku nezinduku. Yonke imijikelezo iyaphela, futhi ukulunywa bekungeke kube okuhlukile kulo mthetho.
UMnu. I-Linux kusho
Ngaphandle kweTroll, kukhona omunye umuntu oyisigebengu esikhulu futhi bangabaphathi beMuyLinux, kusukela kumyalezo wokuqala walo mkhohlisi, bekufanele baxhumane no-Elav ngokushesha bathathe izinyathelo zabo, kodwa ngokwalokho u-Elav asitshela khona ukuthi kwakuphikisana nokuningi ukwazi ukuthi ungubani u-Elav kunaye akasiyena umuntu ongamazi.
Phendula umnu. I-Linux
Sikwenzile esikudlalile, futhi empeleni i-elav uqobo ikusho emnyango. Kepha qonda ukuthi sisenguqulweni ephelele futhi sibi kakhulu ngempelasonto. Siphe imajini encane ukubamba up
Ingabe lokho kwaba ukuhlaselwa kwama-clones? U-Elav, ezolile impela, khehla, esikwaziyo ngomsebenzi wakho, siyazi ukuthi ubungaphendula kanjani futhi lokho kuyenzeka, kepha uma uthola i-ip yakhe, uzonwaya lowomuntu ongenasihe. Okunye engikushintshe imisebenzi muva nje nangezizathu ezingenza ngiqonde ukukhetha futhi noma ngabe i-linux ingahle ibe namaphutha, umsebenzi owenziwe uyancomeka.
Kuyihlazo, kepha abantu abanjena bayohlala bekhona yonke indawo. Mbheke ohlangothini oluqhakazile: Ukuthi uzilingisile kuyindlela yokukubona. Wayengeke azenze njengoMuntu. Ungaziqhenya ngawe.
Kubuye kube yihlazo ngePicajoso. Manje sesingaphansi komphakathi wokubhuloga we-Linux. Uqinisekile ukuthi uzokwenza kahle kulokho okwenzayo.
Kubuhlungu kanjani ukuthi unikezele okuthunyelwe: /
Kulokhu kulungile, i-eLav isivele ikwenzile ukukhishwa kwayo ngalokhu okuthunyelwe ngemuva kwesikhathi eside ibekezelela isiwula esingenampilo futhi sizinikezela ekumhlambalazeni futhi sikucacise ngokwenzekayo; kuqondakala ngokuphelele ukuthi vele ubesenesithukuthezi nge-idiocy engaka wanquma ukubhala iposi lesikhalazo, +1
Angikwenzelanga yena v3on, ngikwenze kubo bonke labo bantu abake beza kimi bebuza ngale micimbi .. futhi ngaleyo ndlela ngenze izinto zicace 😉
: S Yeka umqulu omubi ngithemba ukuthi inkinga izolungiswa kungekudala X_X
Ukuthula kwakho noma kunjalo kwakungekho ndlela yokuthola ngaphandle kokuthi bakubeke lapha ngoba angivakasheli i-Linux XD kakhulu.
haha, kuhlala kukhona ama-troll kuyo yonke inethiwekhi, kufanele nje ungabanaki.
Futhi uma ngikutshele ukuthi yimi lowo troll, hahaha xd
Cha, iqiniso alisoze lanikeza abantu engibahloniphayo ubunzima ngaphandle kwe-elav: ukubhuqa:
Uma ngikutshele ukuthi ukube bekunguwe, ngabe ubuyovele ube no-Anonymous kuwe? i-xDDD
Ngiyaxolisa ngokwenzekile ku-Elav, angitholanga ukuwafunda wonke amazwana kodwa kusobala ukuthi yikuphi ukukhohlisa ngokufunda nje imibono.
Ngiyethemba uyayivimba nokuthi bayinika kahle.
Kuze kube muva nje ngifunde imibono (futhi bekungumbhedo u-Oo) ngineqiniso lokuthi akuwena, lokho kucace bha, kepha leyo hdp yetroli, ngicabanga ukuthi ngumuntu othathwe yile bhulogi futhi akanalutho - .- Uma kukhona into eyodwa engingakwazi ukuyimela, ama-troll, futhi kubi uma bezenza omunye umuntu.
animo elav wonke umphakathi kusuka ku-linux uyakusekela 😀